लकडाउनको समयमा कसरी बढाउने रोग प्रतिरोधक क्षमता ? – Nepal Reports
लकडाउनको समयमा कसरी बढाउने रोग प्रतिरोधक क्षमता ?
जेठ २ २०७७ शुक्रबार
तर, रोगसँग लड्ने क्षमता सबैको एकनास हुँदैन । यसका लागि हामीले शरीरलाई त्यही अनुसार तयार पनि राख्नुपर्छ । कसरी त ?
हरेक बच्चालाई जिद्दी पन बाट समझदार कसरी बनाउने ?
नियमित चाउचाउ खाँदा के हुन्छ ?
यो लकडाउनको समयमा तौल घटाउने सजिलो तरिका
"सफल देखि सफलता सम्मको यात्रा"
दशैँको मुखमा फेरि लकडाउन गर्ने सरकारको संकेत
कोरोनाले रोक्न नसकेको दैलो , झनै गति लिँदै दैल...